ဆိုင်ခန်းပေါင်းက ၄၀၀ ကျော်ပါဝင်မည့် မင်းဓမ္မလမ်း Night Market ရှိ ဆိုင်ခန်းများ ငှားရမ်းမည် - Myanmar Builders Guide
မင်းဓမ္မရဲ့ ဒုတိယ ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်နေရာဖြစ်သော မင်းဓမ္မလမ်းနဲ့ ကျိုက်ဝှမ်းဘုရားလမ်းထောင့်တွင် ပြုလုပ်မည့် Night Marketတွင် ဆိုင်ခန်းများကို ကြိုတင်၍ ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်ခန်းနေရာ Rental Information တွေ သိရသလောက်ဆိုရင် နေရာနဲ့ Zone တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်လစာ ငှားရမ်းခမှာ (၂) သိန်းကျပ်မှစ၍ (၇သိန်းခွဲ) ဝန်းကျင်ထိ ရှိပါတယ်။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် အနည်းဆုံး ၃လ စာချုပ်ချုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စဖွင့်မည့်ရက်မှ ၁၅ ရက်ကိုတော့ ငှားရမ်းခ အခမဲ့ ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆိုင်ခန်းတွေကို ဇန်နဝါရီလ 15 ရက်နေ့ မတိုင်ခင် စာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပါက ငှားရမ်းခကို (၅) သောင်းကျပ် လျှော့ပေးမယ်ဟုလည်း သိရပါတယ်။
ထိုဈေးကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ Tourist Attraction ဖြစ်ဖို့နဲ့ မြို့ပြ လူနေမှုအဆင့်အတန်း တိုးတက်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ပါဝင်လာနိုင်မည့် ဆိုင်ခန်းတွေကတော့ နိုင်ငံတကာက နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်များ၊ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် ရိုးရာလက်မှု ပစ္စည်းဆိုင်များ၊ အဝတ်အထည်နှင့် လူသုံးကုန်တို့ကို တစ်နေရာထဲမှာ စုံလင်နေအောင် စုစည်းထားရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
-ပွဲကွင်း အလယ် မှာ လူငယ်တွေ အကြိုက်တွေ့မယ့် Merry - Go - Round ပုံစံ တူ Bar !!!
-ပေ ၇၀၀ ကျော်ရှည်တဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာ ဝါးလျှောက်လမ်း Stage စင်တွေ Neon Lighting တွေ ကစားကွင်းတွေ နဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Night Life ကို ဖန်တီးပေးထားမယ်ဟု သိရပါသည်။
ဆိုင္ခန္းေပါင္းက ၄၀၀ ​ေက်ာ္ပါဝင္မည့္ မင္းဓမၼလမ္း​ Night Market ရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းမည္
မင္းဓမၼရဲ႕ ဒုတိယ ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ေနရာျဖစ္ေသာ မင္းဓမၼလမ္းနဲ႔ က်ိဳက္ဝွမ္းဘုရားလမ္းေထာင့္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ Night Marketတြင္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ၾကိဳတင္၍ ငွားရမ္းႏိုင္ပါတယ္။
ဆိုင္ခန္း​ေနရာ Rental Information ​ေတြ သိရသ​ေလာက္ဆိုရင္ ေနရာနဲ႔ Zone ေတြ ေပၚမူတည္ၿပီး တစ္လစာ ငွားရမ္းခမွာ (၂) သိန္းက်ပ္မွစ၍ (၇သိန္းခြဲ) ဝန္းက်င္ထိ ရွိပါတယ္။
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ အနည္းဆံုး ၃လ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စဖြင့္မည့္ရက္မွ ၁၅ ရက္ကို​ေတာ့ ငွားရမ္းခ အခမဲ့ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ဆိုင္ခန္းေတြကို ဇန္နဝါရီလ 15 ရက္ေန႔ မတိုင္ခင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုပါက ငွားရမ္းခကို (၅) ေသာင္းက်ပ္ ေလွ်ာ့ေပးမယ္ဟုလည္း သိရပါတယ္။
ထိုေစ်းကိုဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ Tourist Attraction ျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ၿမိဳ႕ျပ လူ​ေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ပါဝင္လာႏိုင္မည့္ ဆိုင္ခန္းေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက နာမည္ႀကီး စား​ေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ ႐ိုးရာလက္မႈ ပစၥည္းဆိုင္​မ်ား၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ လူသုံးကုန္တို႔ကို တစ္​ေနရာထဲမွာ စုံလင္​ေန​ေအာင္ စုစည္းထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
-ပြဲကြင္း အလယ္ မွာ လူငယ္​ေတြ အႀကိဳက္​ေတြ႕မယ့္ Merry - Go - Round ပုံစံ တူ Bar !!!
-ေပ ၇၀၀ ​ေက်ာ္​ရွည္တဲ့ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ ဝါး​ေလွ်ာက္လမ္း Stage စင္​ေတြ Neon Lighting ​ေတြ ကစားကြင္း​ေတြ နဲ႔ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ Night Life ကို ဖန္တီး​ေပးထားမယ္ဟု သိရပါသည္။
Crd: Food in Yangon
Read 906 times	Last modified on Wednesday, 19 February 2020 12:10
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ပန်းခြံများတွင် အဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာ (EOI) ခေါ်ယူမည်
မြို့ပြင်လူနေမှု အပန်းဖြေကုန်တိုက် ပုံစံမျိုး တည်ဆောက်ထားသည့် Terminal M Leisure Mall ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၁၇၀ ကျော်ပါဝင်မည်